“ထိုငျးနိုငျငံမှာပါ ခဈြခငျအားပေး ကွ တဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့ တှခေဲ့ရတဲ့ အုပျ စိုးခနျ့” – XB Media Myanmar
ပြိုမတှေရေဲ့အသညျးကြျော အဆိုတျော အုပျစိုးခနျ့ကတော့ ထိုငျးနိုငျငံမှာပါ ခဈြခငျအားပေး ကွ တဲ့ပရိသတျတှနေဲ့ တှခေဲ့ရတဲ့အကွောငျးကို “တကယျကိုမထငျထားပဲ ထိုငျးနိုငျငံကကှေ ကာအုပျ လေးတှရှေိတာ အခုမှပဲသိတော့တယျ…. အရမျးပြျောပီးဝမျးသာမိတယျဗြာ” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
အုပျစိုးခနျ့ကတော့ ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျကိုတော့ commercial တဈခုကွောငျ့ရောကျနေ တာဖွဈပွီး မကွာသေးမီကမှ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီး အလှကုနျပစ်စညျးတံဆိပျတဈခုရဲ့ Brand Ambassador တဈယောကျအဖွဈ ခနျ့အပျခွငျးခံခဲ့ရပွီး ထိုငျးနိုငျငံကို ပှဲတှလေညျး တကျရောကျရမယျ၊သီခငျြးတှလေညျး ဆိုသှားဖို့ရှိတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ အုပျ စိုးခနျ့ကတော့ အခုလိုထိုငျနိုငျငံမှာ အနုပညာအလုပျလုပျရတဲ့အပျေါမှာလညျး ထိုငျးစာ တှလေညျး သငျမယျ၊ ထိုငျးသီခငျြးလေးနညျးနညျးပါးပါးရနပွေီးမို့ ထိုငျးသီခငျြးတှလေညျး ဆိုပွမယျလို့ဖွကွေားခဲ့ပွီး ထိုငျးနိုငျငံကို အခုလိုပထမဆုံးအနုပညာတှေ စတငျလုပျကိုငျ ခှငျ့ရ တဲ့အတှကျ အရမျးဂုဏျယူပါတယျတဲ့လို့ ဖွကွေားခဲ့ပါသေးတယျ။
အုပျစိုးခနျ့ဟာ ကိုယျပိုငျသီခငျြးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေငျထဲရောကျခဲ့တဲ့အပွငျ သရုပျ ဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ “အိမျမကျတှမေိုးထားတဲ့အိမျ” ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမှာ ပါဝငျ သရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။ပရိသတျကွီးရေ အုပျစိုးခနျ့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာသာမက ထိုငျးနိုငျငံမှာပါ သူ့ရဲ့အမာခံဖနျတှဖွေဈတဲ့ ကှကောအုပျလေးတှရှေိပါတယျတဲ့နျော။
Source: OakSoe Khant,CRD-Cele Gabar
ပျိုမေတွေရဲ့အသည်းကျော် အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ချစ်ခင်အားပေး ကြ တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “တကယ်ကိုမထင်ထားပဲ ထိုင်းနိုင်ငံကကွေ ကာအုပ် လေးတွေရှိတာ အခုမှပဲသိတော့တယ်…. အရမ်းပျော်ပီးဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကိုတော့ commercial တစ်ခုကြောင့်ရောက်နေ တာဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကမှ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး အလှကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တစ်ခုရဲ့ Brand Ambassador တစ်ယောက်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို ပွဲတွေလည်း တက်ရော က်ရမယ်၊သီချင်းတွေလည်း ဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ အုပ် စိုးခန့်ကတော့ အခုလိုထိုင်နိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်း ထိုင်းစာ တွေလည်း သင်မယ်၊ ထိုင်းသီချင်းလေးနည်းနည်းပါးပါးရနေပြီးမို့ ထိုင်းသီချင်းတွေလည်း ဆိုပြမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို အခုလိုပထမဆုံးအနုပညာတွေ စတင်လုပ်ကိုင် ခွင့်ရ တဲ့အတွက် အရမ်းဂုဏ် ယူပါတယ်တဲ့လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
အုပ်စိုးခန့်ဟာ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် သရုပ် ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ “အိမ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ သူ့ရဲ့အမာခံဖန်တွေဖြစ်တဲ့ ကွေကာအုပ်လေးတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်။
ဘောကျဆူးဆိုပွီး မွနျမာငှေ သိနျး ၇၀ ကြျောဖိုး မုနျ့ဖိုးအပေးခံခဲ့ရတဲ့စား ပှဲ ထိုး မလေး